धार्मिक पर्यटनमै कमाउँखेती : योजनाविहीन पर्यटनकर्मी – esetokhari.com
२०७९ असार ८, बुधबार १२:०४
नेपालगन्ज : पर्यटकीय गन्तव्यका लागि खुबै चर्चामा आएको नरैनापुरको बर्फानी बाबा आश्रम दीर्घकालिन योजनाविहीन पर्यनकर्मीकै कारण ओझेलमा परेको देखिएको छ ।सस्तो र क्षणिक लोकप्रियताका लागि जेपनि गर्न पछि नपर्ने बाँकेका पर्यटनकर्मीको यहाँको पर्यटन विकासका लागि कुनैपनि गतिलो योजना नभएका कारण यस्ता पर्यटकीय स्थलहरूले क्षणिक चर्चा पाउँदै लोप हुँदै जाने गरेका छन ।
बर्फानी बाबा आश्रम नरैनापुरमा रहेको सुनेपछि हतासिएर लोकप्रियता कमाउन लागि परेका आफुलाई पर्यटनकर्मी भन्न रूचाउने कृष्ण श्रेष्ठ, श्रीराम सिग्देल प्रदेश साँसद कृष्णा केसी नमूना लगायतको एउटा जम्बो टोलीले बर्फानीबाबा आश्रमको विकास र अवलोकनका लागि आकाशमा हेलिकप्टर समेत उडाएको थियो ।
तर, उक्त हेलिकप्टर उडाईको लक्ष्य अहिलेपनि पुरा त परै जाओस यसको एक प्रतिशत उपलब्धी पनि हुन सकेको देखिदैन । काम गर्न नसक्ने लोकप्रियता चाहिने नेपालगन्जका यस्ता पर्यटनकर्मीकै कारण यहाँका दर्जनबढी पर्यटकिय क्षेत्र चर्चामा सिमित भएका छन ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले धार्मिक पर्यटकीयस्थलको रुपमा विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको भनिएको थियो । तर, उक्त अनुसन्धान अहिले कहाँ पुग्यो ? सायद प्रदेश सरकारका साँसद कृष्ण केसी नमुनालाई नै थाहा छैन ।
सो क्षेत्रको विकासको लागि ‘डीपीआर’ निर्माणको काम थालेको गाउँपालिकाका तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्रजंग शाहीले बताएका थिए ।
यद्दपी पालिकालाई अहिले उक्त डिपिआरकहाँ पुग्यो, कति काम भयो ? केहि जानकारी नभएको बुझिएको छ । मैले गरे भनेर काम देखाउन र सस्तो लोकप्रियता कमाउन एक कदम अघि व्यवसायी कृष्ण श्रेष्ठ र केही पर्यटनकर्मी समेत अहिले चुपचाप देखिएका छन ।
राप्तीसोनारी र नरैनापुरको लेक (अग्लो डाँडो)लाई धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्न प्रदेश सरकारले बजेटसमेत विनियोजन गरेको थियो । उक्त कजेट कहाँ, कति कसरी खर्च भयो यसको लेखाजोखा नै देखिदैन ।
प्रदेश सरकारले यो क्षेत्रको विकासको लागि दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । बर्फानी बाबा आश्रमको विकासका लागि प्राविधिक टोलीले पनि अध्ययन गरिसकेको भनिएको छ । तर, अध्ययन गरेको प्रतिवेदन अहिले पनि सार्वजनिक भएको छेन ।
दुधगिरी पर्वत, गाईलेकमा हेलिप्याड र केबलकार, भ्यू टावर निर्माण गरी धार्मिक पर्यटनको बिकासको लागि पहल भइरहेको नरैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष इश्तियाक अहमद शाह बताउँछन ।
उनकाअनुसार दुधगिरी पर्वतमा रहेको बाबा बर्फानी आश्रम अग्लो शिखरमा छ ।आश्रमको डिपिआर तयार गर्न काठमाडौंको एमके कन्सल्टेन्ट एण्ड कन्स्ट्रक्सन प्रालिले एरियलले जिम्मेवारी लिएको थियो ।‘बाबा बर्फानी आश्रम जिल्लाकै आकर्षण र प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य बन्न सक्छ ।’
उनले भारतीय धार्मिक पर्यटकको घुँइचो लाग्ने त्यस क्षेत्रमा पैदल, साइकल वा मोटरसाइकलबाट पुग्ने गरिएकाले चाहना भएकाले हेलिकप्टरबाटै पनि जान सक्ने व्यवस्था गरिंदा थप आकर्षक हुने तत्कालिन अबसथामा बताएकी साँसद नमुना समेत यस बिषयमा अहिले उदासीन देखिएको नरैनापुरबासी नै बताउँछन ।
यस बिषयमा डिपिआर कहाँ पुग्यो? दीर्घकािलन योजना के बनाइओ लगायतका बिषयमा बुझन खोज्दा नेपालगन्जका पर्यटनकर्मीले प्रतिक्रिया दिन चाहेनन भने साँसद केसीसँग सम्पर्क हुन सकेन ।